Khariidadaha dulinka ee bilaashka ah ee dhammaan waddamada adduunka naqshadeyntaada | Abuurista khadka tooska ah
Imisa jeer ayaad raadisay muuqaalada qariirada juqraafi Internetka? Hagaag, iyo imisa jeer ayaad ku qasabtay inaad dib ugu celiso Sawirka, iyaga oo qalinka ugu duugaya, inaad yeelato khariidad sax ah? Haddii aad waligaa heerkan gaartid, waad jeclaan doontaa kheyraadka maanta
Marna ma ogaan kartid, laakiin waxay noqon kartaa in waqti uun noloshaada ka mid ah aad u baahan tahay khariidad dulinka ah ee Vietnam. Ama ka yimid Fiji, Ustaraaliya, Jasiiradaha 'The Solomon Islands' ... Miyaad dooneysaa inaad dhammaantood tijaabiso? Weli ha jawaabin, maxaa yeelay haddii aad u maleyneyso inaad dhahdo haa, saaxiib qaali ah, waxaad lumineysaa waqtigaaga: waad awoodaa kala soo bax khariidad kasta oo adduunka ah qaab .EPS iyo free.
Waa degel faa iido badan leh oo naqshadiisa aan si gaar ah u jeclahay. Aad ayey u fududahay hel khariidada dalka aad raadineyso oo soo dejiso. Xaqiiqdii, wax walba waa la daryeelay, taas oo aanan ka fikiri doonin in la siiyo iyaga $ 2 yar oo ay u soo jeediyaan inay ku deeqaan khariidad kasta. Waa qiimo aad iyo aad u hooseeya oo ah shay aad u qiimo badan. Dhamaadka maalinta, waxay kuu xafidayaan waqti ... Oo maxaa ka qiimo badan waqtigaaga?
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka faa'iideysato oo aad isku darto khariidadaha mid ka mid ah 60 astaamaha ugu yar iyo dulinka oo aan ku daabacnay qiyaastii sanad ka hor Creativos Online.
Soo gal Khariidado Vector Bilaash ah kuna raaxeysta adeegooda. Waa mashruuc ay fulisay Ted grajeda, yaa ku soo dhaweynaya websaydhkaaga gaarka ah qoraal cad oo ujeedkiisa ah. Hambalyo, waxaan ahay Ted Grajeda. Waxaan qaabeeyaa khibradaha ay ku raaxaystaan ​​dadka adduunka oo dhan maalin kasta. Waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo ". Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kula kulanno, Ted.
Ujeedka websaydhkani waa mid aad loo fahmi karo: baararka sare, u kac qaaradda ay ka tirsan tahay waddanka uu khariidadiisa aad raadineyso ka tirsan tahay. Markaad gudaha gasho, liis ayaa ka muuqan doona dalalka aad khariidaddooda kala soo bixi karto. Tilmaamaha la raacayo waa kuwo aad u cad.
Macluumaad dheeraad ah - 60 Minimalist Icon iyo Vectors, Jigsoar Icons
Xigasho - Khariidado Vector Bilaash ah, Ted grajeda
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » Khariidadaha Khariidadaha Bilaashka ah ee Dhammaan Dalalka Adduunka